နည်းပညာဆိုင်ရာစုစည်းမှုများ: Registry စုစည်းမှု့များ
ကျွန်တော်တို့ စိတ်ဝင်စားစရာ ကောင်းတဲ့ Restrictions (ကန့်သက်ချက် ) တွေကို ကျွန်တော် တင်ပြပေးလိုက်ပါတယ်။ ဘာတွေ ကန့်သတ်နိုင်မှာလဲလို့ မေးစရာရှိတယ်။ ဘယ်လို OS တွေမှာ ကန့်သတ်နိုင်မလဲဆိုတာ တင်ပြပေးပါမည်။ မိမိတို့ computer မှာ အသုံးမပြုစေချင်တဲ့ Display properties ,Taskbar properties , Filder Option စတဲ့ Registry ပေါ်မှာ အခြေခံထားတဲ့ Tricks တွေကို ကန့်သတ်မှု ပြုလုပ်တဲ့နည်း ဖြစ်ပါတယ်။ အရင်ကတော့ ကျွန်တော်ကို အမေးများတဲ့ Registry ပိတ်ရင် ဘယ်လိုဖွင့်လဲ Run Box ပျောက်နေရင် ဘယ်လို ဖော်ရလဲ စသဖြင့် အသုံးများ တဲ့ နည်းတွေကို ကျွန်တော် အတော် များများတင်ပြပေးခဲ့ပြီးပါပြီ။ Software သုံးပြီ လုပ်တဲ့နည်းပါ တင်ပြခဲ့ပါတယ်။ အခုနည်းကတော့ ကိုကိုယ်တိုင်း ဖန်းတီးနိုင် အောင် ကျွန်တော် စုစည်းတင်ပြပေးလိုက်တာဖြစ်ပါတယ်။ Registry ကို စိတ်ဝင်စားတဲ့ သူများ နှင့် Windows အကြောင်း လေ့လာနေတဲ့ သူငယ်ချင်းများအတွက် တင်ပြပေး လိုက်တာ ဖြစ်ပါတယ်။ ကျွန်တော်က Name နဲ့ value ကိုသာ တင်ပြပေးပါမည်။ ကိုယ်တိုင် ဖန်းတီးရပါလိမ့်မည်။ ( အင်တာနက် Café ဆိုဒ်တွေမှာ Registry ကနေ ပိတ်ထားလျင် ဒီနည်းနဲ့ ပြန်ဝင်လို့ ရအောင် စမ်းသတ်ကြည့်နိုင်ပါတယ်) Windows 2000, XP, 2003, Vista, 2008 and7တွေမှာ အသုံးပြုနိုင်မှာ ဖြစ်ပါတယ်။ နောက်တစ် ခု က Registry ကို ၀င်ပြီ အသုံးပြုတော့မယ်ဆိုရင် Back up ပြုလုပ်ထားဖို့ ကျွန်တော် အကြံပေးချင်ပါတယ်။ တစ်ချို့ Code တွေကတော့ ကျွန်တော် ကိုယ်တိုင်း မစမ်းသပ် ဘူးပါ။ ဒါကြောင့် စာဖတ်သူကိုယ်တိုင်း စမ်းသပ်ကြည့်လိုက်ပါ။ ကျေးဇူးတင်ပါသည်။မှက်ချက်။ ။ မိမိပြုလုပ်ထားတဲ့ ကန့်သက်ချက်တွေ ပြန်ပြီ Remove လုပ်ချင်က DWORD value (ဒါမှမဟုတ်) set its value ကို0ထားလိုက်ရုံပါဘဲ။
1. Restrict Display Properties:
HKEY_CURRENT_USER >>Software >> Microsoft >>Windows >>Current Version >> Policies >> System
HKEY_CURRENT_USER >> Software >> Microsoft >> Windows >> Current Version >> Policies >> Explorer
HKEY_CURRENT_USER >> Software >> Microsoft >> Windows >> Current Version >> Policies >>Explorer
21.)Restrict RUN in New XP StartMenu:
22.) Restrict Control Panel:
Posted by P Kyaw Swa at 1:44 PM